Fonooyin Bilaash ah Bisha Sebtember | Abuurista khadka tooska ah
Saacad kasta oo dhaafta, way dhacayaan in ka badan 19.280 kun naqshadood adduunka, sidaa darteed maaddaama ay jiraan shaqo badan in la qabto, waxaa lagama maarmaan ah in qaybtani ay lahaato noocyo cusub oo noocyo kala duwan leh waana in ugu dambeyn, qaab qorista ay u soo baxdo inay qiimo weyn ku leedahay dhammaan noocyada mashaariicda, waana taas wax aan la inkiri karin.
1 Sidee font wanaagsan u kudartaa mashruuc?
2 Noocyada bilaashka ah ee bisha Sebtember
2.3 Nabadoon san
2.4 Playlist bilaash ah
2.6 Nooca Zero
Sidee font wanaagsan u kudartaa mashruuc?
Waa wax lala yaabo sida font fudud ama waxyaabo la mid ah kala dheereynta xarfaha, wuxuu awood u leeyahay inuu si toos ah u saameeyo sida ay akhristayaashu u dareemaan hal ama naqshad kale.
Doorashada farta saxda ah badanaa waxay kala duwanaanaysaa in akhristaha uu waqti qaato iyo inuu akhriyo nuxurka, taas oo macnaheedu yahay waxaad fursad u leedahay inaad wax walba aad uga fududeyso adoo dooranaya waxa ugu fiican uguna habboon qaabkaaga.
Sababtaas awgeed iyo qodobkaan waxaan dooneynaa inaan ku tusno ilaha raalli gelin doona dhammaan noocyada akhristayaasha, sidaas darteed waa inaysan ka maqnaan maktabaddaada.
Waxaan ku tusi doonnaa noocyada farta cusub, kuwaas oo waxay leeyihiin qaab dhismeed wanaagsan waana wax aad u faa iido badan si ay u fududeeyaan mashruucaaga xiga. Xusuusnow inaad hubiso liisankaaga, maxaa yeelay waxay gabi ahaanba u noqon karaan adeeg ganacsi ama adeegsi shaqsiyeed.
Waa far bilaash ah taas wuxuu leeyahay goolal caadi ah, markaa way kufiicantahay cinwaannada iyo waliba naqshadeynta astaanta. Waxay kaloo leedahay laba nooc oo culeys ah, mid geesinimo leh iyo mid fudud.
Waa il gabi ahaanba waa bilaash kaas oo loo heli karo shaqsi ahaan iyo adeegsi ahaanba.
Waa il ku habboon in lagu horumariyo mashaariicda iyadoo a qaab fudud oo fudud oo qaab qoraal ah. Waxaa loo isticmaali karaa si kasta, sidoo kale gabi ahaanba waa bilaash.
Playlist bilaash ah
Waxay ka kooban tahay font handdrawn that has qaababka burushka qalalan. Waxay leedahay seddex qaab, Qurxin, Qoraal, iyo Koofiyado, oo la isku dari karo si loo abuuro naqshad wanaagsan oo qumman. Way awoodaa u isticmaal font nooc kasta oo ujeedooyin ah, iyadoon loo eegin inay tahay mid shaqsi ama mid ganacsi, marka laga reebo inay ku habboon tahay kaararka salaanta, casumaadaha arooska, naqshadaha funaanadaha, iyo kuwo kale.
Font-kan ayaa leh noocyo kala duwan; Template-ka ayaa ku habboon labadaba boodhadh iyo waxyaabo shar ah oo mawduuc leh.
Waa a joomatari font kaas oo ku saleysan shabakada, tani waa isla shabakadda loo adeegsaday markii la sameynayay glyphs, "M" iyo "W". Waxay u muuqataa inay aad ugu habboon tahay cinwaannada iyo boodhadhka iyo sidoo kale astaamaha, sidoo kale gebi ahaanba waa bilaash waxayna leedahay rukhsad adeegsi ganacsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Noocyada bilaashka ah ee bisha Sebtember
Jawaab Nataly Castañeda
ilo aad u wanaagsan, waad ku mahadsan tahay macluumaadka
Ku jawaab fiorela
Waxaan rabaa inaan ka soo dejiyo font boggan mana aqaano sida loo sameyn karo
Ku jawaab Marta Santidrian
Kusamee sawirkaaga qaab joomatari ah